Thumela i-imeyile nge-SMTP kwiWordPress ngeNdawo yokuSebenza kaGoogle kunye nokuQinisekiswa kweZinto ezimbini | Martech Zone
Thumela i-imeyile nge-SMTP kwi-WordPress ngeNdawo yokuSebenza kaGoogle kunye nokuQinisekiswa kweZimbini
NgoLwesibini, Januwari 26, 2021 NgoLwesine, Agasti 12, 2021 Douglas Karr
Ndingumxhasi omkhulu we Ubungqina boBini-Factor (Qhagamshelana) Kuwo onke amaqonga endiwenzileyo. Njengomthengisi osebenza kunye nabaxumi kunye nedatha yabathengi, andinakukwazi ukulumka kakhulu malunga nokhuseleko ukuze indibaniselwano yamagama agqithisiweyo ohlukeneyo kuyo yonke indawo, ndisebenzisa i-Apple Keychain njengendawo yokugcina iphasiwedi, kunye nokwenza i-2FA kuyo yonke inkonzo ibe yimfuneko.
Ukuba usebenza WordPress njengenkqubo yolawulo lomxholo wakho, le nkqubo iqulunqelwa ukuba icofe imiyalezo ye-imeyile (njengemiyalezo yenkqubo, izikhumbuzo zephasiwedi, njl.njl. Nangona kunjalo, esi ayisosisombululo sicebisayo ngenxa yezizathu ezimbalwa:
Eminye imikhosi ibhloka ukubanakho ukuthumela ii-imeyile eziphumayo kwiseva ukuze zingabi kukujolisa kubaduni ukongeza i-malware ethumela ii-imeyile.
I-imeyile evela kumncedisi wakho ayiqinisekiswanga kwaye ayiqinisekiswanga ngeendlela zokuqinisekisa nge-imeyile njenge-SPF okanye iDKIM. Oko kuthetha ukuba ezi imeyile zinokuhanjiswa nje ngqo kwifolda ye-junk.
Awunayo irekhodi yazo zonke ii-imeyile eziphumayo ezityhalwa kwiseva yakho. Ngokubathumela nge-akhawunti yakho yeGoogle Workspace (i-Gmail), uya kuba nazo zonke kwifolda yakho ethunyelweyo-ukuze uphinde ujonge ukuba yeyiphi imiyalezo eyithumela kwindawo yakho.
Isisombululo, ewe, kukufaka iplagi ye-SMTP ethumela i-imeyile yakho kwiakhawunti yendawo yokusebenzela kaGoogle endaweni yokutyhalwa kwiseva yakho.
Ufuna ukuseta iMicrosoft endaweni yoko? Cofa apha
Iplagi elula yeWP SMTP yeWordPress
Kuluhlu lwethu lwe Iiplagi ezilungileyo ze-WordPress, Uluhlu lwe I-WP SMTP elula iplagi njengesisombululo sokudibanisa indawo yakho ye-WordPress kwiseva ye-SMTP yokuqinisekisa nokuthumela ii-imeyile eziphumayo. Ilula ukuyisebenzisa kwaye ibandakanya neyayo ithebhu yovavanyo yokuthumela i-imeyile!
Useto lwe Indawo yokusebenzela kaGoogle zilula kakhulu:
Ifuna i-SSL: Ewe
Ifuna i-TLS: Ewe
Ifuna uQinisekiso: Ewe
Izibuko le-SSL: 465
Nantsi indlela ejongeka ngayo (andibonisi mhlaba wegama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha):
Ingxaki ngoku kungqinisiso. Ukuba une-2FA enikwe amandla kwiakhawunti yakho kaGoogle, ngekhe ufake igama lomsebenzisi (idilesi ye-imeyile) kunye negama lokugqitha ngaphakathi kwiplagi. Uya kufumana impazamo xa uvavanya oko kukuxelela ukuba ufuna i-2FA ukugqibezela ukungqinisisa kwinkonzo kaGoogle.
Nangona kunjalo, uGoogle unesisombululo kule… ibizwa Amagama agqithisiweyo eApp.
Indawo yokusebenzela yakwaGoogle iAppassword
Indawo yokusebenzela kaGoogle ikuvumela ukuba wenze iipassword zesicelo ezingadingi kungqinwa zizinto ezimbini. Ngokusisiseko igama eligqithisiweyo lesitayile esinokuthi usisebenzise kunye nabathengi be-imeyile okanye amanye amaqonga omntu wesithathu… kule meko indawo yakho yeWordPress.
Ukongeza igama eligqithisiweyo lesithuba sokuSebenza:
Ngena kwi yakho Akhawunti yeGoogle.
phantsi Sayina ungene kuGoogle, khetha Amagama agqithisiweyo eApp.
khetha omnye, Kwaye ubhale igama lesiza sakho kwaye wenze iphasiwedi.
UGoogle uya kwenza ipassword kwaye ayinikeze ukuze uyisebenzise ukungqinisisa.
Ncamathisela igama eligqithisiweyo elilula WP SMTP kwaye iyakuqinisekisa ngokufanelekileyo. Vavanya i-imeyile, kwaye uyabona ukuba ithunyelwe:
tags: 2fainboxIgama eligqithisiweyo le-app kaGoogleImeyile kaGoogleIndawo yokusebenzela kaGooglegsuiteSMTPsmtp iplagiukuqinisekiswa kwezimbiniWordPressiplagi yamagama
Ukuphucula uBukho bakho be-SERP kaGoogle ngezi ziQwengana zityebileyo